China Fittings Manufacture and Factory | Jrain
Fitterglass fittings dia matetika vita amin'ny hand-up dingana, misy votoaty resin avo. Ny endrika samihafa dia azo tanterahana amin'ny alàlan'ny bobongolo. Ny volon-koditra samihafa dia azo isafidianana ho an'ny sehatra sy ny serivisy samihafa. Izay fangatahana manokana momba ny habeny sy ny endriny dia azo alaina amin'ny fangatahana.
Fitterglass fittings dia malaza satria nasongadin'izy ireo:
• Hery lehibe mifandraika amin'ny lanja
• Fandrindrana elektrika sy hafanana
• Manohitra ny faharatsiana sy ny simika
• Manohitra ny fitarihan'ny toetr'andro
• Manohitra ny fihenan'ny mari-pana
• kojakoja fanitarana ambany
• Fikojakojana ambany
• Fandraisana anjara tsy manam-petra endrika
• Azo omena amin'ny loko sy endriny isan-karazany
• mahatohitra UV
• Fivoriana sy fanodinana amin'ny fampiasana fitaovana mahazatra
• Fepetran'ny kalitao tsara indrindra
- rano mangatsiaka;
- Fanodinana simika
- Fampivoarana entona miteteo
- Ny fanaterana sakafo
- Trano fandefasana
- Fametrahana miady amin'ny afo
- Fanadiovana rano
- fitsaboana fanjaitra
Manamboatra famaritana an'arivony ho an'ny mpanjifantsika manerantany sy mpinamana amina taona maro ny Jrain arakaraka ny fenitry ny nasionaly sy iraisam-pirenena DIN, ASTM, AWWA, ISO sy ny maro hafa.
Amin'ny lafiny iray, ny Jrain dia manome ny fametrahana rafitra ho an'ny zavamaniry efa misy sy ny fanoloana ireo rafitra taloha, amin'ny lafiny iray kosa, dia manome fitaovana vaovao ho an'ny zavamaniry sy rafitra vaovao isika.
Ny Jrain dia miaina amin'ny fifandraisana maro samihafa amin'ny fantsom-pifandraisana toy ny fifamatorana, laminated, flanged, kofehy ary mifampitohy.
Ny Jrain dia manome ny fanamboarana lamba sy fametrahana ihany koa, izay mahatahotra ny vidiny raha toa ka tsy maintsy atambatra any an-toerana ny singa lehibe satria be loatra ary sarotra ny fidirana.
Ny fikojakojana, fanatsarana ny fotodrafitrasa ary fanamboarana ihany koa dia sampam-panompoan'ny Jrain. Tongasoa eto raha hifandraisa aminay noho ny fitakianao amin'ny antsipiriany.
Previous: Olana hafa
Manaraka: Fiara fiara sy sambo
Fitaovana vita amin'ny FRP
Ny fantsom-bolojika dia misy fantsona fibre vita amin'ny fantsom-borona, fantsona fantsom-borona, fantsom-bistika, fantsona laminate roa (miaraka amin'ny PVC, CPVC, PE, PP, PVDF, sns) ary ny sisa amin'ny fananganana rindrina fantsona fiberglass dia misy lay telo: 1．Liner: mamaritra ny fanoherana mahomby indrindra amin'ny antonony. 2. Rafitra strastika: manome tanjaka mekanika avo sy fanoherana ny vesatra. 3. Ny akanjo ambony: miaro ny rafitra fantsona amin'ny toetr'andro, ny fitrandrahana simika ary ny taratra UV. Izy ireo dia tena pop ...
Famolavola grating, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Masinina fanamafisana GRP, Mamatotra fanamafisana FRP, hamolavola, Nohavaozina Fiberglass,